RASMI: Da’yarka Aduunka Ugu Fiican Ee Ku Guulaysatay Abaal Marinta Kopa Trophy Oo Lagu Dhawaaqay. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
RASMI: Da’yarka Aduunka Ugu Fiican Ee Ku Guulaysatay Abaal Marinta Kopa Trophy Oo Lagu Dhawaaqay.
December 2, 2019 at 20:52 RASMI: Da’yarka Aduunka Ugu Fiican Ee Ku Guulaysatay Abaal Marinta Kopa Trophy Oo Lagu Dhawaaqay.2019-12-02T20:52:03+01:00 CAYAARAHA
Majalada France Football ayaa ku dhawaaqday guulaystaha abaal marinta da’yarka kubbada cagta aduunka ugu fiican sanadkan 2019 ee loo gacan galiyay abaal marinta Kopa Trophy.
Sanadkii hore ee 2018 oo markii ugu horaysay ay majalada France football bixisay abaal marinta da’yarka aduunka ugu fiican ee Kopa Trophy waxaa ku soo guulaysatay Kylian Mbappe laakiin hadda waxay abaal marintani yeelatay guulayste labaad.
Da’yarka xulka qaranka Netherlands iyo kooxda Juventus ee Matthijs de Ligt ayaa si rasmi ah ugu guulaystay abaalk marinta Kopa Trophy ee da’yarka aduunka ugu fiican.
Matthijs de Ligt ayaa soo qaatay sanad aanu waligii ilaawi doonin kadib markii uu kooxdiisii hore ee Ajax la soo gaadhay afar dhamaadkii Champions League ee ay waliba reebeen Real Madrid iyo Juventus.
Laakiin Matthijs de Ligt ayaa sidoo kale door wayn ku lahaa in kooxda Ajax ay xili ciyaareedkii la soo dhaafay ku guulaysatay koobka horyaalka Holland.
Matthijs de Ligt ayaa markii uu ku guulaystay abaal marinta da’yarka aduunka ugu fiican ee Kop Trophy waxa uu u mahad celiyay ciyaartoyda ay soo wada shaqeeyeen.
Waxa uu hadda Matthijs de Ligt ka tirsan yahay kooxda Juventus laakiin sababta uu abaal marintan ugu guulaysatay waa wax qabadkii uu ku soo sameeyay kooxdiisii hore ee Ajax iyo xulkiisa Holand ee tartankii UEFA Nations League.
Matthijs de Ligt waxa uu abaal marintan ka qaaday Sancho oo ka tirsan Borussia Dortmund kaas oo kaalinta labaad galay iyo Jaoa Flex oo kaalinta saddexaad ku dhamaystay.
« VIDEO: Abaal-marinta caawa la bixinayo ee Ballon d’Or 2019 oo la soo gaarsiiyey xarunta ay xafladdu ka socoto ee Theatre du Chatelet
RASMI: Matthijs de Ligt oo ku guuleystay abaal-marinta Kopa Trophy ee da’yarka ugu fiican Sanadka »